Nanao Sonia Fiarahamiasa Miaraka Amin’ny Kodao Productions Ao Filipina ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 4:21 GMT
Kodao Productions. Nalaina tao amin'ny: Facebook
Niforona tamin'ny taona 2000 ny Kodao, ary ekena ho iray amin'ireo vondrona mpampahalala vaovao efa nisy hatry ny ela tao amin'ny firenena.Teny entina hamaritana ny alimanakan'ny vazimba teratany any Atsimon'i Filipina ny teny hoe ‘kodao’, nampiasaina hanamarihana ireo hetsika sosialy tao anatin'ny vondrom-pokonolona iray.
Amin'ny alalan'ny horonantsariny sy ny fandaharan'ny fampielezampeony, ny Kodao dia fantatra tamin'ny alàlan'ireo fandrakofany ireo olana ara-tsosialy izay miantraika amin'ny vahoaka, toy ny fanavaozana ny fananantany, ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny asa, ny fiovaovan'ny toetrandro, ny kolikoly, ny fanitsakitsahana ny zo mahaolona, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ary ny politika tsizarizary momba ny tanàndehibe.
Ny Febroary 2018, voajirika ny tranonkalany, izay vetivety kely dia nampifandraisin'ireo vondron'ny haino aman-jery tamin'ny “ezaky ny governemanta hampanginana ny fanakianana ataon'ny media.” Nanameloka io fanafihana io ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanao Gazety ao Filipina,“ toy ny nataony fony tratry ny fanafihana tsy ankijanona koa ireo fikambanana media hafa. Fanafihana nataon'ireo fahavalon'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ireo zo hafa mahaolona.”
Sarin'ny tranonkalan'i Kodao taorian'ny nijirihana azy
Tsy nitsahatra namoaka sy nanaparitaka tantara eran'ny media sosialy ny Kodao na teo aza ny fanafihana tety anaty habaka.
Haverina halefa atsy ho atsy ny tranonkalany ary hasongadina ao amin'ny pejy voalohany ireo tantara ao amin'ny Global Voices.
Nizara ny hafanam-pony mikasika ny fiarahamiasan'ny Global voices sy Kodao i Raymund Villanueva, talen'ny Kodao:
Matanjaka ny fanadihadiana ataon'i Kodao momba ny resaka zo mahaolona, sehatra fototra sy ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony, ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny famahàna disadisa, ankoatra ireo olana hafa momba ny rariny ara-tsosialy ao Filipina. Ny antenaina amin'izany dia ny mba handraisana anjara amin'ireo karazana tantara ao amin'ny Global Voices hahafahan'ireo vahoaka maneran-tany mahafantatra tsara ny fanantenàna sy ny hetaheta ary indrindra koa ny tolona ataon'ny vahoaka Filipiàna mba hanànany fiarahamonina tena malalaka tsara, demokratika, ary mandàla ny rariny.
Santionany amin'ny asan'i Kodao ity manaraka ity izay manasongadina ireo feon'ny vahoaka voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Ny tatitry ny lahatsary dia mikasika ny fiantraikan'ilay vinavina hametraka lalambe manamorona ny farihin'i Muntinlupa sy Laguna any amin'ny ampahany atsimon'i Manila, renivohitry ny firenena.